Home ताजा खबर कस्तो छ तपाइको पासवर्ड ? ध्यान दिनुस यस्तो नराख्नुस – ह्याक होला है
दुनियाँमा करोडौ मानिसहरुले अकाउण्टको सुरक्षा गर्न सजिलो पासवर्ड राख्ने गर्छन। सम्झन सजिलो हुने र टाइप गर्न समेत सजिलो हुने पासवर्ड राख्ने गर्छन। जसका कारण उनीहरुको अकाउन्ट सजिलै ह्याकर हरुले ह्याक गर्न सक्छन। साइबर सुरक्षा सम्बन्धि एक अध्ययनमा अधिकांश मानिसले आफ्नो सहजता को लागि पासवर्ड सजिलो राख्ने गरेको पाइयो।
सजिलो पासवर्डमा १२३‍‍‍४५६ , १२३४५६७८९ , ‘qwerty’, ‘password’ र १११११११ जस्ता सजिलै अनुमान गर्न सकिने पासवर्ड अत्याधिक राख्ने गरेको पाइएको छ। यस्ता सहज पासवर्ड राख्दा अकाउन्ट कुनै पनि बेला ह्याक हुने खतरा हुन्छ।
सम्झन र लेख्न यस्तो सजिलो पासवर्ड भएपनि यसले अकाउन्टको सुरक्षा हैन ह्याकरलाइ सजिलो बनाउछ। पासवर्ड को सहजताको लागि मानिसहरु आफ्नो नाम, परिवारको सदस्यको नाम, जन्ममिति, आफ्नो ठाउको नाम जस्ता सजिलै अनुमान लगाउन सकिने सब्द्द प्रयोग गर्ने गर्छन।
तपाइँ आफ्नो अकाउन्ट सुरक्षा गर्न चाहनु हुन्छा भने जटिल पासवर्ड राख्नुस। अक्षर अंक र स्पेसल क्यारेक्टरको कम्बिनेसन तयार गरि बनाइएको पासवर्ड बनाउनु पर्छ। जुन अनुमान गर्न अति नै गारो हुन्छ। एक अध्ययनले १२३४५६ राख्ने अधिकांश मानिसको अकाउन्ट ह्याक सहज रुपमा भएको पाइएको थियो। तेसैले यस्ता सहज पासवर्ड राख्नु हुदैन। आफुलाई मनपर्ने कुनै पनि कुरा लाइ पासवर्डको रुपमा प्रयोग गर्नु हुदैन। यदि आफ्नो अनलाइन अकाउन्ट सुरक्षित बनाउने हो भने सजिलै पत्ता लगाउन नसकिने जटिल पासवर्ड नै बनाउनु पर्छ।
सर्वोच्चले माग्यो ढुंगेल ' कैद मिनाहा को सरकारी निर्णयको सक्कल फाइल
आफु बिरुद्ध षड्यन्त्र गर्नेलाई रविको चुनौती ! म बिदेशी हैन नेपाली हु !
निर्मलाको पोस्टर जति च्यात्यो, उति भाइरल बन्दै
Posted in ताजा खबर, सुचना प्रबिधी.
सारेगामाप सेमीफाइनलमा आयुषको उत्कृस्ट प्रस्तुति ! जजहरुले काधमा बोके ( भिडियो )